Network Engineering ဆိုသော အလုပ် — MYSTERY ZILLION
Network Engineering ဆိုသော အလုပ်
March 2010 edited March 2010 in Networking
senior အကို အစ်မ များခင်ဗျာ..
အလုပ်တွေထဲမှာ Network Engineering / Senior Network Engineer / Junior Network Engineer ဆိုပြီး ခေါ်နေတာတွေ တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ Network Engineering တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရန် ဘာ လက်မှတ်တွေ ရထားသင့်သလဲ ဘာတွေ တတ်ထားသင့်သလဲ ဆွေးနွေး ပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ၀င်ရောက်ဖြေဘူးသော အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် mail sever ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသလဲ အမေးခံရပါတယ်ခင်ဗျာ(ဘယ်နှစ်မျိုးရှိပါသလဲ ခင်ဗျာ ? ကျွန်တော် မသိပါ) ၊ လုံး၀ ပျက်စီးသွားသော Hard disk တစ်လုံးမှ အရေးကြီးသော Data များကို Rate ဘယ်လောက်နဲ့ ပြန်ယူရင် ရနိုင်မည်လဲ မေးပါသည်။ (အဲ့ဒီမေးခွန်း အဖြေကိုလဲ သိချင်ပါသည် ? ) အမှန်အကန်မသိပါ။ PAPH တပ်ဆင်နိုင်သလား မေးပါသည် ။ အဲ့ကောင် တတ်ဖို့ရန် ဘယ်လိုသင်တန်းကျောင်းမျိုး သွားတတ်ရပါမည်နည်း။ မေးတာတွေများလို့ စိတ်မရှိကြပါနဲ့ခင်ဗျာ။ အရမ်းသိချင်သော အရာများ မို့ပါ။ သူမေးတာတွေတော့ စုံလှပါသည်။ အဲ အားရစရာ နောက်ဆုံးကတော့ အဲ့ဒါတွေ တတ်သော senior အစ်ကိုအစ်မများ ခန့်မှန်းလစာ ဘယ်လောက် ထည့်သင့်ပါသလဲ အကြံပေးစေလိုပါသည် ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ၀င်ဖြေခဲ့သော အင်တာဗျူးမှ network engineer ရာထူး လစာမှာ5သောင်း ဖြစ်ကြောင်း ပါ။:((
ဘယ်ပို့တွင်လဲမမှတ်မိတော့ပါ အစ်ကို တစ်ယောက် ရေးသော စာသားကို သတိရမိပါသည် ။ IT ဆိုတာ ငအ တဲ့ တတ်ရမယ့် အရာတွေနဲ့ လစာ နဲ့ (
ကျနော် ဒီမှာ ပိုစ့် တစ်ခုတင်ထားတယ်။
Bro အတွက် နဲနဲတော့ အသုံး၀င်မှာပါ။
Bro ကြုံခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတွေလဲ အဲမှာ ရေးပေးပါ .....
http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php/8048-IT-Technician-amp-Interview လင့်ကိုသွားကြည့်တယိ စမျက်နှာမတွေ့ပါဆိုပြီးပဲပေါတယ ကျနော်လဲ သူမေးထားတာတွေသိချင်လို့ပါ